Ny lahatsoratr'i Yariv Erel momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Yariv Erel
Yariv Erel dia mpiara-manorina sy CEO an'ny justAd, orinasa teknolojia famoronana manolotra sehatra famoronana doka feno hamoronana doka amin'ny haino aman-jery manankarena vokatra. Ny marika dia mandany vola ary mampidi-doza amin'ny laoniny amin'ny doka nomerika tsy mahomby. JustAd ny doka mahaliana sy lafo vidy dia miteraka fanandramana manan-danja amin'ny mpampiasa.
Alatsinainy Martsa 27, 2017 Talata, Martsa 28, 2017 Yariv Erel
Ny dokam-barotra amin'ny finday dia mitohy ho iray amin'ireo sehatra mitombo haingana indrindra sy sarotra indrindra amin'ny toekarena ara-barotra manerantany. Raha ny filazan'ny masoivohitry ny fividianana doka Magna, ny dokambarotra niomerika dia hihoatra ny doka fahita amin'ny fahita amin'ny TV amin'ity taona ity (misaotra indrindra amin'ny dokambarotra finday). Amin'ny taona 2021, ny dokambarotra finday dia nitombo hatramin'ny $ 215 miliara, na 72 isan-jaton'ny teti-bola dizitaly totalin'ny varotra nomerika. Ka ahoana no ahafahan'ny marikao miavaka amin'ny tabataba? Miaraka amin'ny AI mikendry ny entam-barotra amin'ny fomba tokana